Mahery vaika indrindra Cleaning Robot
* High farany fanaraha-maso lavitra
* Floor, manda, rano no fanadiovana
* Lehibe Indrindra suction fahaiza: 18.m³ / h
* mampihetsi-po haingana indrindra hafainganam-pandehany: 15m / min
* 3D Gyroscope Fikarohana
* Taona fotoana: 0.5 / 1 / 1,5 / 2h
* Weekly fameram-potoana; -End avo fanaraha-maso ny boaty amin'ny miseho
* PVA borosy
iRANGER dia avo-dobo madio alalan'ny milina azo baikoina farany tamin'ny fanadiovana mahery indrindra fahafahana.
Entin'ny 3 mahery sy ny rivo-doza Motors suction rafitra miasa, dia hoatr'izany iRANGER amin'ny suction afaka ny 18m³ / h, ary mampihetsi-po haingana amin'ny 15 metatra / min, fa azo antoka fa ny matanjaka indrindra madio alalan'ny milina azo baikoina.
3D Gyroscope Fikarohana
Fitaovana amin'ny lalana manan-tsaina sy ny fampifanarahana tena fandaharana, dia afaka mamantatra iRANGER tangle mety vokatry ny fahadisoan-dàlana sy manao fanitsiana rehefa tena fikarohana amin'ny alalan'ny ambonin'ny farihy. Fikarohana rindrambaiko no miantoka tanteraka dobo-gorodona no rakotra.
Mafy tapaka tanteraka amin'ny Pool Walls
iRANGER avo lenta ny 4 PVA borosy miantoka ny tapaka sy mafy rehefa niakatra dobo mandanao, ary ny flexibiligy ny hifindra ny sakana. PVA borosy manokana indroa zavatra maharitra, raha mbola mahazatra fingotra borosy sy manohitra menaka, bakteria, ahidrano sy ny loto hafa.
Manan-tsaina Remote Control
Aoka iRanger hanao ny asany amin'ny baikoina mialoha lalana na hitarika azy ho any amin'ny toerana iray dia ilaina mafonja fanadiovana amin'ny alalan'ny fampiasana ny fanaraha-maso lavitra manan-tsaina tonga miaraka amin'ny milina.
A 7-day programmable mamonjy ny fameram-potoana manahirana ary fampahoriana fanadiovana ho an'ny manan-tsaina.